मेरा लागि सत्ता प्रमुख होइन, नैतिकताको चिन्ता हो ! - Sidha News
मेरा लागि सत्ता प्रमुख होइन, नैतिकताको चिन्ता हो !
अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशबासीका नाममा सम्वोधन गर्ने खबर सुनेपछि धेरैलाई लागेको थियो, आज किन प्रधानमन्त्रीले सम्वोधन गर्न लागेका होलान् ?
जब प्रधानमन्त्रीले ७२ बुँदे सम्वोधन पढ्न सुरु गरे, सरकारले कोरोना महामारीलाई सम्वोधन गर्न खोजेको जस्तो देखियो । बीचमा आइपुग्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा जवाफ दिएजस्तो देखियो । सम्वोधनको मुख्य भाग राष्ट्रपतिले संसदमा पढ्न नपाएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमजस्तो देखियो ।
प्रधानमन्त्रीले सम्वोधनको ७० नम्बर बुँदामा भनेका छन्, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्रीको यो भनाइबाटै प्रमाणित हुन्छ कि उनले देशबासीका नाममा सम्वोधन गर्दै टेलिभिजनबाटै ‘सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गरेका हुन् । र, अब यही आधारमा शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् ।
सम्वोधनको अन्त्यतिर पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले त्याग, नैतिकता, विधि पद्दति र लोकतन्त्रको चर्चा गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नीतिहीन गठबन्धनको भर्याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक झेली काम हो । जनताप्रति अविश्वास गर्नु हो ।…. मेरा लागि सत्तामा रहनु या नरहनु प्रमुख विषय हुँदै होइन । आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिकमूल्यहीन र विकृत अभ्यास झाँगिदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो ।’